Musharaxiinta Madaxtinimo oo eedeeyay Saxiixayaasha Roadmapka-ka Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Musharaxiinta Madaxtinimo oo eedeeyay Saxiixayaasha Roadmapka-ka Ku dhawaad 10 Musharax oo u taagan xilka Madaxtinimo ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku eedeeyeen Saxiixayaasha Roadmap-ka in ay afduub ku hayaan Roamapka oo uu ay qeyb ka tahay qabashada doorashada.
Xili mudo bil ah ay ka dhiman tahay waqtiga dowladda KMG ah islamarkaana la qorsheynayo dhisida dowlad cusub oo aan KMG aheyn ayaa qaar ka mid ah musharaxiinta waxa ay muujinayaan walaac ay ka qabaan Saxiixayaasha Roadmapka gaar ahaan kuwa dowladda.
Axmed Ismaaciil Samatar oo ka mid ah 7 Musharax oo maanta shir jaraaid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in waxii ay ka walaacsanaayeen ay hada muuqato oo waxa uu sheegay in Saxiixayaasha ay wadaan afduub sida uu hadalka u dhigay ay ku doonayaan in ay ku kali noqdaan doorashada iyo Roadmap-ka.
Sidoo kale Musharaxa Madaxweyne C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa waxa uu sheegay in musharaxiinta ay maanta soo jeediyeen in la sameeyo Gudi farsamo oo ay ku jiraan xubno kala matalaya musharaxiinta iyo sidoo kale Gudiga doorashada dhaqaalaha dowladana laga bixiyo gacanta Saxiixayaasha hadii kale waxii kazoo baxa doorashada waxa uu sheegay in aysan xalaal aheyn.
Bisha August oo ay ay ka dhiman tahay wax ka yar hal bil ayaa waxaa lagu wadaa in lasoo dhiso dowlad rasmi ah oo ka hana qaada Soomaaliya waaba hadii lagu guulaysto ansixinta dastuurka.